Madheshvani : The voice of Madhesh - कांग्रेसको भरोसाको केन्द्र मधेश नै हो : रामकृष्ण यादव
कांग्रेसको भरोसाको केन्द्र मधेश नै हो : रामकृष्ण यादव
० हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामलाई कांग्रेसले कसरी समीक्षा गरेको छ ?
— देशभरि ५२ स्थानमा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मिश्रित परिणाम ल्याएको छ । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति जनताले असन्तुष्टि जनाएको छ र परिणाम पनि त्यस्तै आएको छ ।
० सरकारसँग जनता असन्तुष्ट छन् भने कांग्रेसप्रति पनि त झुकाव बढेको देखिएन नि ?
— यो पनि सत्य कुरा हो । कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । सडक र सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको जुन भूमिका हुनुपर्ने थियो, जनताको जुन अपेक्षा छ त्यसमा कांग्रेस चुकेको जस्तो देखिन्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन । असंवैधानिक कामहरू गरिरहेको छ । संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम यो सरकारले गरिरहेको छ । यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाउँमा प्रश्रय नै दिइरहेको अवस्था छ । महँगी दिनप्रति दिन आकाशिँदै गएको अवस्था छ । यी सबै कुराहरूलाई कांग्रेसले जुन सक्रियताका साथ जनतामाझ लिएर आउनुपर्ने थियो, त्यसमा चुकेकै हो । अर्को कुरा, पार्टीभित्र सहमति सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरालाई जनताले उपनिर्वाचनमार्फत अभिमत दिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले नेकपाको किल्लामा कब्जा जमाएको छ । यो उपनिर्वाचनमा नेकपाले सत्तालाई हरेक दृष्टिकोणले दुरूपयोग गरेको छ ।
० भनेपछि, नेकपाले सत्ताको दुरूपयोग गरेको तपाइँहरूको निष्कर्ष छ ?
— बाहिरीरूपमा हेर्दा उपनिर्वाचन शान्तिपूर्णमै भएको देखिन्छ तर, नेकपाले सत्ताको दुरूपयोग गरेर धाँधली गरेकै हो । जस्तै, महोत्तरीको पिपरा र कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ पोखरामा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बम पड्काइएको थियो । नेकपाकै कार्यालय नजिक बम पड्काइयो, त्यसको सिम्प्याथी मत प्राप्त गर्न सफल भयो । बम पड्काउने गिरोहलाई यो सरकारले अहिलेसम्म पनि पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । नेकपाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाको पनि व्यापक चलखेल गरेको छ । सत्तारूढ नेकपाले आफूतिर मत तान्नका लागि हरेक हत्कण्डा अपनाएको देखियो ।
० सत्ताको दुरूपयोग गरेको, पैसाको चलखेल गरेको, बम पड्काएको लगायतका आरोपहरू लगाउनुभयो, तर यसका प्रमाणहरू छ ?
— बम पड्किएको कुरा त सबैलाई थाहा भएकै हो । तर, त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने, गिरोहलाई पक्राउ गर्ने सरोकारवाला निकाय त सरकार नै हो । सरकारले यस्ता अपराधिक क्रियाकलापप्रति चासो नलिनु, यसबाट त प्रष्टै हुन्छ कि सत्ताकै चलखेल थियो ।
० नेपाली कांग्रेसको गढ मधेश थियो, तर दिनप्रति दिन मधेशबाट कांग्रेस विस्थापित हुँदै गएको छ नि ?
— कांग्रेस र तराई÷मधेश एकअर्काका पूरक हुन् । कांग्रेस र मधेशको सम्बन्ध नङ र मधेशजस्तै छ । जब–जब मधेशमा कांग्रेसको पक्षमा राम्रो परिणाम आएको छ, तब–तब कांग्रेसको सरकार बनेको छ । कांग्रेसको सरकार बन्दा मधेशमा पनि राम्रो विकास भएको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकार नभएसम्म मधेशमा विकास सम्भव छैन । अहिले निश्चितरूपमा मधेशमा कांग्रेस कमजोर देखिएको हो । यसमा हाम्रो पनि केही कमीकमजोरीहरू छन् । मधेशमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन विभिन्न षड्यन्त्रहरू हुँदै आएको छ । केही झुठा नारावाला पार्टीहरूलाई मधेशमा स्थापना गराइएको छ । केही शक्तिहरू कांग्रेसलाई मधेशमा कमजोर बनाउन लागिपरेका छन् । गत निर्वाचनमा मधेशका जनताले जसरी मत प्रयोग गरे, त्यसबाट अहिले पछ्तारहेको अवस्था छ । विगतको चुनावभन्दा अहिले कांग्रेसप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पहाडमा झुठा राष्ट्रवादको नारा दिने नेकपा र तराई÷मधेशमा झुठा नारा दिने राजपा र समाजवादीलाई पनि जनताले हेरिसके । अब जनताको भरोसाको केन्द्र कांग्रेस नै बन्दै गएको छ ।
० नेपाली कांग्रेस विगत लामो समयसम्म सत्ता सञ्चालन ग¥यो, तर मधेशमा विकास किन भएन ?
— अहिलेसम्म तराई÷मधेशमा जेजति विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, ती सबै कांग्रेसकै पालामा भएको हो । २०४६ सालपछि मधेशको विकासको दृष्टिकोणले हेर्दा धेरै फड्को मारेको छ । नेपाल कांग्रेस पटक–पटक सत्तामा पुग्यो, राज्य सञ्चालन ग¥यो भन्ने कुरा सही हो । तर, कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकालसम्म सत्ता सञ्चालन गर्न सकेन । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामनारायण मिश्रजी उद्योगमन्त्री हुँदा उहाँले नै जनकपुरधाममा चुरोट कारखाना स्थापना गराउनुभएको थियो । त्यसले यहाँको आर्थिक अवस्था माथि उकास्न ठूलो योगदान पु¥याएको थियो । अहिले नेपाल र भारतबीच नयाँ रेल सञ्चालन हुन लागेको छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसकै नेता डा.रामवरण यादवजी राष्ट्रपति हुँदा भारतसँग भएको थियो । त्यस्तै, मधेशको मेरूदण्डको रूपमा रहेको हुलाकी सडक कांग्रेसकै सरकार हुँदा अवधारणा ल्याएको थियो । यस्ता हरेक विकास निर्माणका कार्यहरू कांग्रेसकै पालामा भएको थियो । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुन लागेको छ तर, अहिलेको सरकारले के गरेको भन्ने हेर्दा भाषणमा मात्र सीमित देखिएको छ ।
० तर, मधेशी नेताहरूसँग कांग्रेसले न्याय गरेन भन्ने आरोप छ नि ?
— नेपाली कांग्रेसमा मधेशका नेताहरूको धेरै ठूलो योगदान छ र त्यसको मूल्यांकन पनि कांग्रेसले अवश्य नै गरेको छ । नेपालको प्रथम राष्ट्रपति कांग्रेसले नै बनाएको हो । महन्थ ठाकुरजी पनि कांग्रेसमा हुँदा प्रतिष्ठित नै नेताकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, फरमुल्लाह मन्सूर लगायतका थुप्रै नेताहरूलाई कांग्रेसले सम्मानित पद नै दिएको छ । कांग्रेस जस्तो समावेशी पार्टी कुनै छँदैछैन । त्यसकारणले सामाजिक, राजनीतिक र व्यक्तित्व विकासको दृष्टिकोणले कांग्रेसले मधेशलाई उचित सम्मान गरेको छ । अहिले प्रदेशदेखि संघसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, दुई वर्ष भइसक्यो सरकार स्थापना भएको, तर कुनै पनि काम भएको छैन ।
० कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी बिहीबार बस्ने भनिएको छ, के–के छ एजेन्डा ?
— नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समग्रमा देशको समसामयिक विषयवस्तु र हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनबारे समीक्षा हुनेछ । यो उपनिर्वाचनमा हामी कहाँ चुक्यौं, हाम्रो पक्षमा जनअभिमत के आयो, अपेक्षितरूपमा किन आएन लगायतका विषय समीक्षा हुन लागेको हो । हाम्रो महाधिवेशनको पनि कुरा छ, यो बैठकले त्यसको पनि कार्यतालिका बनाउँछ । भ्रातृ संगठनहरूको बारेमा पनि छलफल हुनेछ । यसैगरी, स्थानीय तहमा तेस्रो चरणको जागरण अभियान सञ्चालनबारे निर्णयहरू हुन्छ । समग्रमा मुलुकको राजनीतिक अवस्था, पार्टीको आन्तरिक संरचना र सरकारले गर्दै आएको असंवैधानिक कार्यहरूबारे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
० कांग्रेसभित्रको गुटउपगुट, घातअन्तर्घात सामान्यजस्तो देखिए पनि यसले आगामी निर्वाचनमा कस्तो असर गर्छ त ?
— नेपाली कांग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । सबैले आआफ्नो कुरा राख्नु स्वाभाविक नै हो । तर, जुन किसिमको एउटा नकारात्मक संस्कार विकसित हुँदै आएको छ, यसले पार्टीलाई धेरै हानी गरिरहेको छ । पार्टीलाई नै हानी हुने खालको गुटउपगुटलाई जरैबाट समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसप्रति नेतृत्वपंक्तिले बेलैमा सचेत भई गुटउपगुटलाई हटाउनुपर्छ । सामान्य गुटउपगुट पनि पहिलादेखि नै थियो, तर यसले अहिले विकराल रूप लिँदै गइरहेको छ । कांग्रेस जस्तो पार्टी जसले मात्र देशलाई निकास दिन सक्छ तर आफैमा कमजोर हुँदा अहिले अन्योलग्रस्त अवस्था देखिएको छ । नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्रको रूपमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ, यसलाई कायम राख्न गुटउपगुटलाई हटाउनैपर्छ ।
० सीमा विवाद नेपाली कांग्रेसको लागि एउटा चुनावी एजेन्डा बनेको थियो, चुनाव पनि सम्पन्न भइसक्यो । अहिले पनि त्यही धारणा छ कि अब परिवर्तन भएको छ ?
— सीमा विवाद नेपाली कांग्रेसको चुनावी एजेन्डा थिएन । कांग्रेस एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । जनताको पार्टी भएको हुनाले भूमिदेखि लिएर नेपालको सुरक्षाको विषयमा पनि चासो राख्नु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धलाई कायम राख्न देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सीमा विवादलाई कुटनीतिक पहल गरी समाधान गर्नुपर्नेमा यो सरकारले केही नगरेकोले हामीले यस विषयमा बोल्न बाध्य भयौं ।